Mootichi Suud Arabiyaa Abdullaah du’aan boqate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Mootichi Suud Arabiyaa Abdullaah du’aan boqate
Mootichi Suud Arabiyaa Abdullaah du’aan boqate
Yeroo dheeraadhaaf fuula Suud Arabiyaa kan ture mootichi Abadallaah bin Abdulaziiz umrii 90 tti du’aan boqate. Abdullaah naannoo woggaa 10tiif mootii biyyattii ta’ee tajaajilaa kan ture. San duras bara 1995 kaasee hanga 2005 tti yeroo mootichi duraa Fahaad rakkoon fayyaa manatti isa hiitee turtetti, dhimmoota biyyattii gurguddaa kan geggeessaafi raawwataa ture Abdullaah ture. Wolumaa galatti Suud Arabiyaan naannoo wogaa 20 tiif harka Abdullaah turte jechuudha. Du’iinsa Abdullaatiif sababa kan ta’e dhibee sombaa ‘pneumonia’ ta’utu himama. Abdullaah Sadaasa 31 kaasee hospitaala ture. Awwaalchi isaa har’a Riyaad keessatti geggeeffama.
Mootichi Abdullaah kallattii hedduun, kanniin isa dura turan huda irra, haaromsaa ta’uu isaati kan himamu. Bulchiinsa mootich Fahaad irrummaafi malaamaltummaan guutame hanga tokko qulqullessuufi sara qabsiisuun isaa ummata biraa kabajaa akka argatu isa taasiseera. Ta’us, rakkoolee biyyattiin gama bulchiinsa gaariitiin qabdu hundeedhaa furuu hindandeenne jedhu kannniin isa qeeqan.
Du’a isaa irratti motummoonni heddu ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Perezidaant Baaraak Obaamaan Suud Arabiyaa, Ameerikaafi Jiddugaleessi Bahaafi addunyaan nama cimaafi mul’ata qabu dhabuu isii dubbateera. Itti dabaluudhaanis Abdullaah nama nageenniifi tasgabbiin jiddugala Bahaatti akka dhufuuf ciminaan hojjataa tureedha jedhe.
Du’a Abdullaah hordofee, Salmaan bin Abdulaziiz bakka isaa bu’ee mootomeera. Salmaan bara 1935 itti dhalate. Salmaan woggaa 48 bulchaa magaalaa Riyaadi ture. Bulchiinsa isaa jalatti laakkofsi jiraattota Riyaad 200,000 irraa gara miliyoona 7 tti olguddateera. Riyaadi ammayyoofte, qabeenyaanis badhaate. Bara 2012 yeroo Salmaan eeggataa mootii ta’ee kaadhimamee kaasee Ministera Ittisa biyyattiifi Ittaanaa Muummicha Ministeraa ta’eeti kan hojjataa ture. Egaa Salmaani ture woggoota lamaan dabraniif dhimmoota gurguddaa , keessattuu dhimmoota haajaa biyya alaa Suud Arabiyaa, adda durummaan geggeessaa kan ture.
Mootichi biyyattii haarofni Salmaan bin Abdulaziiz obboleessa isaa Muqriin bin Abdulaziiz eeggataa isaa akka ta’uuf kaadhimeera. Umriinis jaarsa, gama fayyaatiinis rakkoo qabeessa ta’uun kan irraa dubbatamu mootichi Salmaan yoo dabre Muqriin ta’a jechuudha kan mooyu. Maqriin ilma mooticha durii, bu’uuressaa mootummaa biyyattii kan turee, Abdulaziiz isa quxisuuti. Egaa Muqriin mooyuuf hiree argate taanaan mooyiinsi ilmaan Abdulaziiz isa irratti goolabama jechuudha. San booda angoon gara ilma ilmatti dabra.
mootich suud arabiyaa
muqriin bin abdulaziiz
Salmaan bin abdulaziz
Previous articleHuman Rights Watch Itoophiyaan miidiyaa wolabaa doorsisti, hujiin ala taasisti jedha
Next articleArsenaal tapha FA Cup isa marsaa itti aanutti dabre. Cheelsiifi Manchastar Siitiin dorgommiin ala ta’an